Story | Abdikadir Askar
Posted on January 2, 2018 by Abdikadir Askar(AA)
Waa sheeko-faneed murugo iyo saxariir-nafeed xanbaarsan. Dhagaraha dhacaya ee sheekadan ku duugani waa is-difaacid, nolol-raadis iyo aar-goosi lagu xardhay midab-diimeed. Sawirro is-micnaynaya oo si walba u xanuun badan, daboolkanna ka qaadaya nolosha adag ee laga dhaxlay is-eedkii shacabka Soomaaliyeed.
Abshir waxa uu toosay inyar ka hore hiirtii waaberi. Dhaxan daran baa jirtay oo qofka u diidaysay in uu weysaysto, waa se uu ku qasbanaa in uu si uun maaro ugu helo. Laba rakacdood oo sunne ah ayuu ku tukaday … Continue reading →
Posted in Somali, Story, Youth	| Leave a reply
Aabo Shirre inta badan isma ay arki jirin wiilkiisa Abshir. Waxa ku badnaa safarada ganacsi ee uu ku tagi jiray deegaanadda kale duwan ee Gobolada Sanaag, Beri iyo Nugaal. Ganacsigiisa Kalluunku wuxu ahaa mid aad u suuq badan, shirkaddiisuna waxa ay u kobcaysay si xawli sare leh. Aabo Shirre wuxu filanayey in wiilashiisa, gaar ahaan Cumar-yare iyo Abshir, ay la maamuli doonaan ganacsiga bal se waxa ay ahaayeen niman aan u heelanayn amuuraha ganacsi ee aabahood waday. Continue reading →
December 25, 2017 by Abdikadir Askar(AA)
Giiraanta waqtigu way rooraysay. Il-bidhiqsi kasta wuxu ahaa mid xiiso gaar ah huwan oo aan la dhaadayn goorta uu ku dhaafay. Xogaha uu xafiiskaygu isku soo ururiyey waxa ay ahaayeen kuwo amakaag leh. Rumaysigoodu ma uu hawl yarayn waxa ayna … Continue reading →
Waan ku daalay raadistiisii. Wax aan deris la ahaa werwer badan oo iga hayey raacdada walaalkay Abshir. Malahayguna wuxu i farayey in uu iska beddalay baadi-soocdii. Cidlo ayaan keli haabayey. Maraykan noloshiisa muddo dheer baa iigu danbaysay, wax macarifo ahina … Continue reading →